Wonke ummamkeli ufuna ukwenza iintyatyambo ezintle ezingenakuthobela indlu. Ziziphi ezifanelekileyo zokukhetha? Ndingayinceda njani? Namhlanje sifuna ukukuxelela ngegadi kunye ne-geranium, malunga nezinye izityalo ezithandwa kakhulu phakathi kwabemi besifazane.
I-Gardenia jasmine yile ntsapho ye-madder, ilizwe layo liJapan, eChina. Isityalo, esilungileyo ngobuhle bayo, sisihlahla esiphezulu sitshakabhaka esinamaqabunga amnyama ahlaza okomnyama ahamba ngokubhekiselele. I-Gardenia ikhula ibe yi-0.6-1 m, iibhola ukusuka ngoJuni ukuya kuSeptemba. Ngexesha lokuqhakazila, ekupheleni kweemfucumfucu zomntu omdala, i-inflorescences kunye neziqhamo ze-2-5 iziqwenga zivela, iintyatyambo ezinkulu ze-terry, zinyuka ukuya kwi-8 cm ububanzi, nombala omangalisayo ukusuka kumhlophe ococekileyo ukuya kwi-shades shades, eyahluka kunye nabo kuxhomekeke kwisigaba seentyantyambo.
I-Gardenia yinto encinci, ifuna imimiselo yokugcinwa kwesityalo. Nangona isityalo sithanda ukufudumala, ukukhanya nokunyamezela, kufuneka kukhuselwe kwi-sun. Ukuba ukukhanya eklasini kubuthathaka, ngoko kufuneka unike isityalo ngokukhanyisa okongeziweyo, ukudala i-10-12 ilanga lokukhanya. Ukulungiswa okufanelekileyo kwesityalo kufuneka kuhambelane nokushisa okuphakathi kwe-18-22 ° C, ebusika kungekho ngaphantsi kwe-16 ° C. Iqondo lokushisa lomhlaba kunye nomoya kufuneka libe yinto efanayo, enzima ukuyilawula. Ngethuba lokubunjwa kweefom, kubalulekile ukugcina ubushushu kwi-17-19 ° C emini, ebusuku-2 degrees engezantsi. Ubushushu beli gumbi apho isityalo sitholakala khona, kufuneka kube njalo, kwaye utyilise ngenyameko, ngaphandle koko igadidi iya kulahla i-buds.
Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulelwe kumswakama womoya kunye nokutyiliswa okufanelekileyo kwesityalo. Amanzi okunkcenkceshela kufuneka acidified, ngexabiso le-pH elifikelela kwi-5, isityalo siyimfuneko kakhulu yokuvula amanzi kunye nokomisa umhlaba, kanye kanye ngenyanga kuyimfuneko yokongeza i-citric acid emanzini. Ngexesha lokuhamba, umswakama womoya kufuneka uphakame, ukugcina imbotyi yayo kunye nesityalo esibekwe kwi-pallet enezinto ezinomanzi, umzekelo, i-moss kunye ne-periodically sprayed. Emva kokuba iintyatyambo zichithwe, ukutshiza kufakwe ukukhusela ukuvela kwimibala emdaka emagqabini.
Ukuchumisa isityalo, i-mineral okanye isichumisi se-organic ngaphandle kwe-calcium, esongezwa ngamaxesha amathathu ngenyanga. Isityalo sithintela kakhulu ukubunjwa komhlaba, ngokukodwa ukungabikho kwesinyithi kunye ne-chlorine engaphezu kwamanzi.
Ukusasazwa kwegadi, i-apical cut-cut cuttings isetyenzisiweyo, ezithatha ingcambu kwintwasahlobo okanye ekwindla ngexesha lomxube we-peat nesihlabathi. Ngethuba lexesha lokuhluma kubalulekile ukugcina umoya kunye nobushushu bomhlaba malunga ne-25 0 C. I-capacity for transplantation iyanda ngokukhula kwesityalo, kodwa ingabalulekanga.
Iingambuzane ezihlasela isityalo, umntu unokukwazi ukubona i-aphid, izilwanyana zesicabungulu, izilwanyana.
I-Geranium ibhekisela kwintsapho enkulu yegeranium, ibe neengcambu zaseMzantsi Afrika. Isityalo sisityalo esiqingqiweyo, esiqingqiweyo esinamaqabunga ahlambulukileyo, kunye nobude obupheleleyo be-1-1.5 m. Into ebalulekileyo yegeranium yimifuno enephunga elikhethekileyo kunye neenwele ezincinci. I-Geranium iyisityalo esingathandekiyo esilula, sithanda kakhulu ukutyilisa ehlobo kwaye sincinci-ebusika. Ukuziva ngokugqibeleleyo kwifestile kwiimeko eziqhelekileyo, kwithuba lehlobo lasehlotyeni linqweneleka ukongeza i-mineral fertilizer emanzini.
Ukubunjwa kwetyala elincinci, ihlathi kufuneka lihlulwe okanye lihlulwe, kodwa kungekho rhoqo. Ngamanye amaxesha kunokwanela ukucoca isityalo sokwanda kwezityalo kwisityalo, ukuba siza kwenza amahlumela amasha. Kuba ukuzaliswa kwe-geraniums kwanele ukunqumla i-apical stem kwaye uyitshale kwindawo ehlukeneyo eyomileyo eyomileyo, i-podvyavy encinane ngaphambi kokufika. Ixesha elona xesha lihle kakhulu lokunqunyulwa kwesityalo kukuphela kwebusika - ukuqala kwentwasahlobo kunye nehlobo.
Ukutshintshwa kwe-geraniums kuyadingeka minyaka yonke, ngexesha lesantwasahlobo ngaphambi kokuqala kokukhula. Akuyimfuneko ukutshintshela i-geranium kwisitya esikhulu, ngaphandle koko isityalo siza kuhlakulela ngokukhawuleza amahlumela ngaphandle kwemifuno. Umhlaba omhle we-geraniums ngumxube wesanti kunye nokubunjwa, okuquka i-humus, iqabunga kunye ne-turf (1: 2: 2: 2).
IGERAN IS SOUL (IPELARGONIUM IS SOUL)
Enye yeentlobo ezingapheliyo ze-geraniums, ayifuni imimiselo ekhethekileyo yokuvalelwa, ikhula kakuhle ngasentla. Isityalo sinokuyihlobisa ngokugqibeleleyo kwigumbi, ekubeni amaqabunga ayo, ngokungafani nezinye iintlobo ze-geraniums, zinemibala enomdla kunye nombala, kunye nephunga elimnandi, into efana ne-lemon. Iintyatyambo ezincinci zinemibala eyahlukileyo ukusuka kwipinki ukuya eluhlaza.
I-GERAN ZONAL (IPELARGONIUM ZONAL) - isityalo esinobumba , obomvu obomvu obomvu kunye namaqabunga amancinane. Iintyatyambo zinemibala eyahlukileyo kunye nenani leepalali, eziqokelelwe kwi-peduncles kwiimvulebhu ze-hemispheric.
I-GERAN ISIXHOSA (I-PELARGONIUM LONKE-IKHOLI) - inhlobo enhle kakhulu yegeranium, ihlobisa kakhulu amagumbi, ngenxa yamagqabantshi amakhulu amakhulu atyhiweyo kunye neendonga eziqingqiweyo. Iintyatyambo zikhulu, zinemibala eyahlukeneyo kunye nemibala, ukusuka kumhlophe ukuya kwi-burgundy. I-geranium yesiNgesi ihamba ngeenkwenkwezi, ithanda amabala apholileyo, apho ikhupha kakuhle kwaye ininzi.
Ngoku kuhleli nje ukuba ukhethe zeziphi iintyatyambo endlwini oyifunayo!
Ikhalenda yeLunar yefama yeloli ngoMeyi 2016
Izityalo zangaphakathi: i-palm cariota
U-Ekaterina Ivanchikova wase-IOWA utshata
Imfundo nokukhuliswa komntwana onokuphulukiswa kwengqondo esikolweni
Uqokelelo lwamawashi i-Apple Watch i-Hermes: I-high-fashion and high technology
Siza kunceda uArsen Kogan
Iingcebiso ezilungileyo kwabasetyhini abakhulelweyo
Nguwuphi umbala ofanelekileyo emehlweni e-blue-blue?
Umfazi angayigcina njani ubuhle kunye nempilo?
Iindawo ezintle kakhulu eMoscow: ukulinganiswa kweepaki eziphambili (umfanekiso)
I-Lenten i-pie neepatates kunye ne-buckwheat